HomeWararka CiyaarahaManchester United oo xiiseyneysa garabka Kooxda Leeds ee Raphinha
May 21, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa xiiso u qabta inay u dhaqaaqdo garabka Leeds ee Raphinha suuqa kala iibsiga ee soo socda.
Laacibka reer Brazil ayaa waqti wax ku ool ah ku soo qaatay Premier League tan iyo markii uu 15 milyan ginni ugu soo biiray kooxda Yorkshire 2020 kooxda Ligue 1 ka ciyaarta ee Rennes.
Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo uu dhaliyay 10 gool isla markaana uu isku diiwaan galiyay seddex caawin 34 kulan oo Premier League ah oo uu u saftay kooxdiisa xilli ciyaareedkan, Raphinha iyo Leeds ayaa laga yaabaa inay ku dhacaan heerka labaad ee Championship.
Qorshayaasha suuqa kala iibsiga xagaaga ee Man United ayaa u muuqda mid isku sii kordhinaya tababaraha joogtada ah ee soo socda ee Erik Ten Hag oo imanaya England maalmihii la soo dhaafay si uu u bilaabo diyaargarowga xilli ciyaareedka 2022-23.
Raphinha ayaa la sheegay inuu yahay magac ay xiiseynayaan marka ay timaado bartilmaameedyada garabka midig ee suurtogalka ah, inkastoo xafiiltanka adag ee u dhexeeya labada kooxood uu si fiican u baabi’in karo dhaqdhaqaaq kasta oo suurtagal ah, iyadoo sidoo kale saameyn ku yeelanaysa u wareejinta suurtagalka ah ee kabtanka Leeds Kalvin Phillips ee Old Trafford sidoo kale. .